Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.2 kathisha Human
Kathisha amaphrojekthi Human athathe inkinga enkulu; ukuwuchitha zibe yizicucu elula; thumela ukuba izisebenzi eziningi; bese sesisonke imiphumela.
kathisha amaphrojekthi Human ukuhlanganisa imizamo abantu abaningi abasebenza on ezilula micro-imisebenzi ukuze baxazulule izinkinga ukuthi ziphakeme ngendlela engafinyeleleki elikhulu ngomuntu. Ungase ube nenkinga ucwaningo efanelekayo kathisha womuntu uma uke wacabanga: Ngangibona ukuxazulula le nkinga ukube ngangisebenza eyinkulungwane abasizi ucwaningo.
Isibonelo prototypical komuntu kathisha phrojekthi Galaxy Zoo, okuyinto ngizobuya ukuchaza ngokuningiliziwe ngezansi. Kulesi phrojekthi, izisebenzi zokuzithandela ezingaphezu kuka-100,000 bahlukanisa images of mayelana 1,000,000 zemithala ngokunemba efanayo phambilini-futhi kakhulu ezincane-imizamo izazi zezinkanyezi professional. Lokhu isikali lenyuka olunikezwa mass ukubambisana kuholela izinto ezintsha mayelana nendlela imithala ukwakha, futhi waphenduka i isigaba esisha ngokuphelele zemithala ebizwa ngokuthi "Peas Green."
Nakuba Galaxy Zoo kungase kubonakale kude ucwaningo social, zikhona izimo empeleni eziningi lapho abacwaningi social ufuna ikhodi, ahlukanisa, noma izithombe ilebula noma imibhalo. Kwezinye izimo, lokhu ukuhlaziywa kungenziwa ngu-computer, kodwa zikhona namanje izinhlobo ezithile ukuhlaziya ukuthi zinzima computer kodwa lula ngabantu. Kuyinto laba bantu kulula i-nokho kanzima i-computer micro-imisebenzi ukuthi singakwazi Pheqa ku kathisha amaphrojekthi womuntu.
Akukona nje kuphela ukuthi micro-umsebenzi Galaxy Zoo ngempela jikelele, isakhiwo project jikelele kanye. Galaxy Zoo, kanye nezinye kathisha amaphrojekthi womuntu, sebenzisa uqhekeko-zisebenza-sihlanganise isu (Wickham 2011) , futhi lapho usuyiqonda lelisu uzokwazi ukuyisebenzisa ukuxazulula eziningi izinkinga. Okokuqala, inkinga enkulu ihlukaniselwe inkatho nezixhobo kancane inkinga. Khona-ke, umsebenzi womuntu sisetshenziswa ngamunye isinqamu kancane inkinga, ezimele ezinye nezixhobo. Ekugcineni, imiphumela yalo msebenzi ehlangana ukukhiqiza isixazululo ukuvumelana. Ngenxa yalezi, ake sibone ukuthi kwenzeka kanjani uqhekeko-zisebenza-sihlanganise isu lalisetshenziswa Galaxy Zoo.